How to Burn a Disc in Computer | OS-UKUBEKA Blog
December 4, 2018 ecommerce Computer, Electronics, OS-UKUBEKA, OSGEAR Ukusekela, Storage, Ubuchwepheshe, Imaniwali yosebenzisayo 0
oshayelayo Optical ayabaluleka zihlobane uma kuziwa ekusebenziseni kwazo kodwa abantu abaningi bangase usafuna unekhono ukulayisha isofthiwe evela kwabezindaba ngokomzimba, ukudlala kwencazelo high Blu-ray movie ku-computer, ulalele i-CD noma bakwazi ashise izithombe namavidiyo ku-DVD. I Blu-ray disc kuletha enhle kakhulu elwazini uma udlala ku-TV noma amanye amadivayisi.
Optical isitoreji ifomethi >>>
Disc Compact (CD) ~
Compact isitoreji disc kususelwe abezindaba efanayo ukuthi sisebenzisa yomsindo compact disc. Ezomhlaba isitoreji isikhala emhlabeni 650 ukuze 700 Wedatha disc ngayinye. Abakwazi aqukethe umsindo, idatha noma kokubili kwi disc efanayo. isofthiwe Iningi amakhompyutha kwakusakazwa ku CD ifomethi.
Digital Anhlobonhlobo Disc (DVD) ~
DVD lwenzelwe compact digital video format ukuthi futhi sasenza off enkundleni isitoreji idatha. DVD ubhekwa ngokuyinhloko kuvidiyo futhi liye kusukela baba standard ukuze usetshenziselwe isofthiwe ukusatshalaliswa ngokomzimba. oshayelayo DVD zisekhona nasemuva iyahambisana CD ifomethi, Nokho.
Blu-ray HD-DVD bobabili kule ncazelo high format impi kodwa Blu-ray wagcina ukuphuma. Ngayinye yalezi uyakwazi ukugcina kwencazelo high amasignali isiqophi noma idatha amakhono ezisukela njengoba low 25GB ukuze phezu 200GB kuye isibalo izingqimba phezu akwazi ukugcina. Azikho HD-DVD compatibles ngemoto wenza kusaba kodwa Blu-ray ngemoto kuyoba iyahambisana kokubili DVD ne-CD.
Ukwahlulela indlela Apple kususwe ngokuphelele idrayivu optical kusukela MacBook entsha futhi MacBook Air, CD zivutha DVD ku Macs kungenzeka kuzoba yinto yesikhathi esidlule pretty ngokushesha.
Faka i-CD alinalutho noma DVD ku-Mac sika drive yakho.
Kusukela imenyu Action, ukhetha Vula Finder. Chofoza OK
Vula Finder ewindini elisha. I-CD alinalutho noma DVD ivela eseceleni.
Donsa bese uphonsa amafayela namafolda ungene CD noma i-DVD.
Uma usulungele ukudala disc, ngokuchofoza Shisa njengoba kuboniswe ngenhla.
Burning i-CD alalelwayo iTunes ~
Kusukela iTunes “Ifayela” imenyu, ukhetha “Uhlu lwadlalwayo olusha”. Thayipha igama lokudlala bese ucindezela Faka.
Hudula iculo ofuna ivele CD ku lwadlalwayo.
Kunconywa ukuthi amafayela yasekuqaleni ukuba waklebhula Apple esingaqinile noma ifomethi AIFF.
Chofoza “Burn CD” inkinobho ezansi ewindini lwadlalwayo.
Faka nalutho-CD-R / CD-RW ku disc drive yekhompyutha yakho. Chofoza “Burn CD” ngesinye isikhathi.
Izinyathelo alandelayo kufanele agcwaliswe ngaphambi kokuqala lesi sinyathelo.
Faka i-CD nalutho ku disk drive yekhompyutha yakho. Njengoba laptops eziningi aziveli nge esakhelwe CD slot, cishe kuyodingeka sangaphandle CD umfundi ukwenza lokhu. Windows kufanele ngokuzenzakalelayo vela inkhulumomphendvulwano ngibuza ukuthi ufuna ukwenzani nge-disc.
1. Burn Idatha Disc
Hudula ifolda udinga bashise ku disc. CD yakho kumele umkhiphe uma kuqedile evutha.
2. Burn lomsindo CD
Uma ufuna ukuba ashise i-CD alalelwayo, ukhethe Burn i-CD inketho alalelwayo, okuyinto uzosebenzisa-Windows Media Player ukuze umsebenzi. Uma inkhulumiswano okuzivelelayo aliveli, vele uchofoze Qala, uhlobo-Windows Media Player ukuze uyivule bese uchofoza Disc elingenalutho kwimenyu sobunxele.
3. Burn Isiqophi DVD
Ungafuna ashise DVD isiqophi Windows, ongakwenza, kodwa kudinga usebenzisa elinye ithuluzi. Uma usebenzisa i-Windows 7, ungavele ukusebenzisa uhlelo lwe-Windows DVD Maker ukuba ashise amavidiyo DVD. Windows 8 kanye ne-Windows 10 kususwe i-Windows DVD Maker, ngakho kufanele usebenzise uhlelo third-party ezifana uNero, BurnAware Mahhala, CDBurnerXP.
Okunye ukuncoma isofthiwe >>>
UNero isekela audio evutha, Full HD izinga isiqophi, nedatha CD, DVD, noma Blu-ray Disc. I module uNero Burning ROM uphatha le nqubo. ukusebenza ngamunye enembile futhi kuthatha indawo ngokushesha futhi enokwethenjelwa.
uNero (ebibizwa uNero Multimedia Suite) kwanelisa izidingo zakho uma kuziwa nokuhlela amavidiyo, umsindo nezithombe, umsebenzi cutting edge eyenza touch-ups, lishisa iphrojekthi yakho ngokushesha.
BurnAware Mahhala >>>
Itholakala ku-Windows wokusebenza, awahluphi BurnAware Mahhala wuhlelo disc optical igunya ukuthi kusekela CD, DVD, and Blu-ray akwazi ukugcina. It izibambo afanayo kwamafomethi yomsindo kanye. Lolu hlelo engasindi kodwa functional isekela MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, Ogg, futhi m4a.
Esibonakalayo ehlanzekile Kulula ukusebenzisa. Isofthiwe isekela eliphezulu DPI ebuyako ongaphakeme ukusetshenziswa kwe-CPU.
CDBurnerXP Isekela uvutha izinhlobo eziningana optical abezindaba akwazi ukugcina, kuhlanganise ne-DVD, CD, HD-DVD, futhi Blu-ray. Ungakwazi bashise ama-CD alalelwayo noma idatha CD MP3, AAC, Ogg, WAV, FLAC, Lacy, nezinye ifomethi. CDBurnerXP ingafakwa izinguqulo eziningi Windows ne inikeza Multilanguage interface yomsebenzisi-friendly.
Wawungeke ubhale idatha uma uvaliwe disc.
Khetha eduze disc inketho ukuthi ungakwazi ukufunda ifayela kwezinye abashayeli.
DVD-RAM Blu-ray ungakwazi njengoba ngepeni umshayeli kaningi ukufunda
I sivinini sekufundza awukwazi ukufinyelela ijubane isizathu eliphakeme ~
I disc sebhithi nokusekelwa
Lesi sihloko uncoma amawebhusayithi, amacala athile zisekelwe website esemthethweni.
Thola ulwazi oluthe xaxa, Chofoza lapha
Idlalwa kanjani 3D Blu-Ray BD Isiqophi??
Burn lomsindo CD
Burn Idatha Disc
Burn Isiqophi DVD
HD Graphics Ubuchwepheshe Software Model Kudivayisi Injongo Yomphakathi Intel processor Umakhala ekhukhwini Technology_Internet HTC Series Driver ukweseka OS-UKUBEKA nencazelo zomthetho 64-bit Windows ukweseka umshayeli izilimi CPU Nokia Samsung umphathi wedivayisi